Uhlolojikelele Lwezinto ezibonakalayo - Ifilimu - MimoWork
Uhlolojikelele Lwempahla - Ifilimu
Ifilimu ye-polyester iyinto eyinhloko kuzo zonke, evame ukubizwa ngokuthi i-PET (i-Polyethylene Terephthalate), inezinto ezibonakalayo ezibonakalayo zefilimu yepulasitiki. Lokhu kufaka phakathi amandla aphezulu okushuba, ukumelana namakhemikhali, ukuzinza kokushisa, ukukhanya, ukucaca, ukumelana nokushisa okuphezulu, izakhiwo zokushisa ezishisayo nezikagesi.
Ifilimu ye-polyester yokupakishwa imele imakethe enkulu yokusetshenziswa ekugcineni, elandelwa yimboni ehlanganisa izibonisi zamaphaneli ayisicaba, kanye nefilimu kagesi/ye-elekthronikhi efana nefilimu ekhanyayo, njll. Lokhu kugcina kusebenzisa i-akhawunti cishe yonke ingqikithi yokusetshenziswa komhlaba wonke.
Izinzuzo ze-Laser Cutting Polyester Film:
Uma kuqhathaniswa nezindlela ezijwayelekile zokuwenza ezebanga elijwayelekile elisetshenziswa njengezinhlelo zokupakisha, iMimoWork yenza umzamo owengeziwe wokuhlinzeka ngezixazululo ze-laser efilimini esetshenziselwa izinhlelo zokubona kanye nokusetshenziswa okukhethekile kwezimboni nogesi.
• Ukunemba okuphezulu - ukusika okungu-0.3mm kungenzeka
• Vala ngokuzenzakalelayo imiphetho yokusika
• Ukuguquguquka okuphezulu kwawo wonke umumo, usayizi wefilimu
• Ukucutshungulwa okungenathintwa - akukho ukuguga kwamathuluzi, ikhwalithi yokusika ephezulu engaguquki
Imboni ye-foil iyaqhubeka nokuthuthuka. Namuhla i-foil ayikwazi ukusetshenziswa kuphela ezinhlelweni zasezimbonini ezifana ne-reprographics, ifilimu yokugxiviza eshisayo, amaribhoni okudlulisa ukushisa, amafilimu okuvikela, amafilimu akhululayo, amateyipu anamathelayo, namalebula namadekeli; ugesi/ugesi njengama-photoresists, motor, kanye nokufakwa kwejeneretha, izintambo nokugoqwa kwekhebula, amaswishi e-membrane, ama-capacitor, namasekhethi aphrintiwe aguqukayo kodwa futhi angasetshenziswa ezinhlelweni ezintsha ezifana nezibonisi zephaneli eyisicaba (ama-FPD) namaseli elanga, njll. I-MimoWork laser ihlose ukuxazulula izinkinga ezingaba khona phakathi nokukhiqizwa kwefilimu yakho nokuthuthukisa ibhizinisi lakho kukho konke ukusebenza kwansuku zonke.
I-MimoWork ingakusiza kanjani?
Njengoba ifilimu ye-polyester iyinto enohlu olubanzi lwezinhlelo zokusebenza, ukuze uqiniseke ukuthi isistimu yakho ye-laser ifaneleka ngokufanelekile kuhlelo lwakho lokusebenza, sicela uxhumane ne-MimoWork ukuze uthole ukubonisana okwengeziwe nokuxilongwa. Sikholelwa ukuthi ubuchwepheshe obushintsha ngokushesha, obusafufusa ezimpambanweni zokukhiqiza, ukusungula izinto ezintsha, ubuchwepheshe, kanye nezohwebo bungumahluko.
Singuzakwethu okhethekile we-laser!